विश्वकपको अर्को मैदान ~ Bijay Timalsina
विश्वकपको अर्को मैदान
Posted by bijay Kumar Timalsina on 6:26 AM
ब्राजिलमा अहिले विश्वकप फुटबल अन्त्यतिर पुगेको छ, फाइनलसहित दुई खेलमात्र बाँकी छन् । त्यहाँका १२ स्टेडियममा मात्रै यो खेल सीमित छैन । स्टेडियममा खेल हुँदा जति हल्ला हुन्छ, त्योभन्दा बढी विश्वकपको चर्चा सोसल मिडियामा भइरहेको छ । यसमा खेलका दर्शकमात्रै होइनन्, चर्चित खेलाडी र टिमका म्यानेजर पनि सामेल छन् । इटालीका डिफेन्डर जर्जियो चेलिनीको बायाँ काँधमा दाँतको डोब र ब्राजिली स्टार नेयमरको चोट यो विश्वकपको सबैभन्दा चर्चाका विषय बने । यी दुई यस्ता विषय रहे, जसले सोसल मिडियामा विश्वकपको 'हाइप' बढाइदिए ।
डिफेन्डर चेलिनीको काँधमा चोट दिएका उरुग्वेली फरवार्ड लुइस सुआरेजले घर पुगेपछि टि्वटर र फेसबुकमार्फत चेलिनीसँग मागेको माफी र चेलिनीले दिएको जवाफ पनि उत्तिकै चर्चित छन् । समूह चरणको अन्तिम खेलमा चेलिनीलाई टोकेको प्रमाणित भएपछि फिफा (अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ) ले सुआरेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय नौ खेल र चार महिना फुटबल गतिविधिमै प्रतिबन्ध लगायो । लिभरपुलका सुआरेजले पश्चतापको शैलीमा चेलिनीसँग माफी मागे । चेलिनीले उनको टि्वटरमै रिप्लाई गर्दै आफूले घटना बिर्सिसकेको र फिफाले उनलाई गरेको कारबाही घटाउने आशा व्यक्त गरे ।
चेलिनीको यो उदार उत्तर टि्वटरमा झन्डै एक लाख पटक रि-टि्वट भएको छ । हजारौंले फेभरेटमा क्लिक गरेका छन् । सुरुमा सुआरेजले अस्वीकार गरे पनि उनले चेलिनीलाई टोकिरहेको तस्बिर टि्वटर र फेसबुकमा भाइरलजस्तै फैलिए । त्यो उनको गल्ती प्रमाणित गर्ने अभियान जस्तै बन्यो । अन्ततः बाध्य भएर सुआरेजले माफी नै माग्नुपर्‍यो । त्यसका लागि उनी सोसल मिडियामै आए ।
क्वाटरफाइनलमा कोलम्बियाका जुआन कामिलो जुनिगाको घुँडाले ठोक्किएर ढाडको तल्लो हाड फ्याक्चर भएपछि विश्वकपका बाँकी खेल खेल्नबाट वञ्चित ब्राजिली स्टार नेयमरप्रतिको माया पनि सोसल मिडियामा खुबै छायो । चोटग्रस्त भएपछि मैदानमा रुँदै गरेको र हेलिकप्टरमार्फत अस्पताल लगिएको उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा 'भाइरल' नै बने । कामिलोलाई खलनायकको संज्ञा दिँदै आक्रोश पोखिए । त्यो आक्रोशको जवाफ उनले फेसबुकबाटै दिए, 'नेयमरलाई घाइते बनाउने मेरो उद्देश्य थिएन । म नेयमरलाई सम्मान गर्छु र लाग्छ उनी विश्वका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीमध्ये एक हुन् । आशा गर्छु, उनी चाँडै निको होऊन् ।'
नेयमरले गहभरि आँसु पार्दै आफू घाइते भए पनि विश्वकप जित्ने सपना नटुंगिएको भन्दै दिएको भिडियो सन्देशले सबैलाई भावुक बनाए । सवा करोड फलोअर भएको उनको टि्वटरलाई मेन्सन गर्दै लाखौंले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरे । त्यसमा इङ्ल्यान्डका पूर्वस्टार डेविड बेकह्याम, बार्सिलोनाका सहकर्मी लियोनल मेसी पनि छन् । यो विश्वकप सोसल मिडियाको रेकर्ड तोड्दै सबैभन्दा बढी अन्तक्रिर्या हुने इभेन्ट बन्यो । ब्राजिल टि्वटरको बढी प्रयोगकर्ता हुने देशमध्ये चौथोमा पर्छ । ब्राजिलकै नेयमर, डेभिड लुइज र थिएगो सिल्भा फोटो सेयरिङ साइट इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा बढी फलोअर हुने खेलाडीमा पर्छन् ।
विश्वकपका लागि ब्राजिल पुगेका प्रायः सबै खेलाडीको आफ्नै टि्वटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राम पेज छ । उनीहरूले आफ्ना पेजमा व्यक्तिगत तस्बिर र जानकारी राखेकाले पनि विश्वकप सोसल मिडियामा बढी नै छाएको हो । विश्वकपबारे सोसल मिडियामा बहस गर्नेमा नेपाली राजनीतिज्ञिदेखि सेलिबि्रटीसम्म सामेल छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई टिम अर्जेन्टिना र मेसीको समर्थनमा टि्वट गर्छन् । अर्जेन्टिनाले स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध खेलको अन्तिम १६ को खेलअघि उनको टि्वट थियो, 'आज मेरो मस्तिष्क र मुटु अर्जेन्टिना र मेसीको पक्षमा छ ।'
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नागरिक अभियन्ता देवेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वकप खुबै लागेको छ । उनी आफूले टि्वटमात्रै गर्दैनन्, अरूले गरेका टि्वटमा रिप्लाई र रि-टि्वट पनि गरिरहेका हुन्छन् । नायिका केकी अधिकारी भन्छिन्, 'फ्यानको चासो विश्वकपबारेकै टि्वटको चर्चा चल्छ ।'
फेसबुक तथ्यांकअनुसार विश्वकपको समूह चरणको खेल सकिँदामात्रै १ अर्ब अन्तक्रिर्या भए । फेसबुक स्थापनायताकै सबैभन्दा धेरै स्टाटस, लाइक्स र कमेन्ट आएको इभेन्ट यही विश्वकप हो । फेसबुक र टि्वटरले विश्वकपका लागि बनाएको छुट्टै हबका कारण प्रयोगकर्ता झन् बढी आकषिर्त भएका हुन् । टि्वटरले विश्वकपमा सहभागी कुनै पनि देशको छोटकरी नाम ह्यास ट्याग राखेपछि स्वतः त्यो देशको झन्डा देखाउँछ ।
फेसबुकले 'ट्रेन्डिड विश्वकप' नाम दिएर अन्तक्रिर्याका लागि छुट्टै हब बनाएको छ । विश्वकप खेल्न ब्राजिल पुगेका खेलाडीको इन्स्टाग्राममा खेलाडीहरूले पोस्ट गरेका पर्सनल तस्बिरहरूले पनि समर्थकलाई थप उत्साहित पारेको छ । विश्वकपको क्रोएसियाविरुद्धको उद्घाटन खेलमा ब्राजिली स्टार नेयमरले प्रेमिका ग्राभियला लेन्जीसँग खिचेको सेल्फी पनि चर्चित बन्यो । फरवार्ड लुकास पोडोल्स्कीले जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलसँग लिएको सेल्फी पनि धेरै मन पराए । टि्वटरमा धेरै फ्यान भएका फुटबलर पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टोली समूह चरणबाटै घर फर्केको घटना ठूलै बहस बन्यो । उनको निकै आलोचना पनि भयो ।
अमेरिकाविरुद्धको समूह चरणको अन्तिम खेलमा मात्रै रोनाल्डोलाई टि्वटरमा १५ लाखपटक मेन्सन गरिएको थियो । अघिल्लो विश्वकपको फाइनलमा स्पेनसँग हारेको नेदरल्यान्ड्सले यसपल्टको पहिलो खेलमै लिएको बदला, त्यसमा डच कप्तान रोबिन भान पर्सीको 'फ्लाइड हेडर' को अहिलेसम्मै चर्चा भइरहेको छ । भान पर्सीलाई स्पाइडर म्यान र ब्याटम्यानको अवतार दिइएका तस्बिर लाखौंपटक सेयर गरिए ।
नेदरल्यान्ड्सले मेक्सिकोलाई जितेको खुसीमा डच हवाई सेवा कम्पनी केएलएमले आफ्नो आधिकारिक टि्वटरबाट सेयर गरेको फोटो निकै विवादित बन्यो । नेदरल्यान्ड्सले खेल जिते लगत्तै दाह्री पालेको र मेक्सिकन ह्याट लगाएको व्यक्ति एयरपोर्टबाट बिदाइ हुँदै गरेको जस्तो देखिने फन्नी फोटो सेयर गरेको थियो । जसमा डच भाषामा फेरि भेटौंला लेखिएको थियो । यस्तो फोटोले मेक्सिकनको चित्त दुखायो । मेक्सिकन कलाकार गेल गार्सिया बेर्नलले टि्वट गरेर आफू केएलएममा कहिल्यै यात्रा नगर्ने प्रतिक्रिया दिए । लगत्तै केएलएमले उक्त पोस्ट डिलिट गर्दै गल्ती सच्यायो ।
सोसल मिडिया त्यही जमानामा चल्तीमा भएको भए जिनेदिन जिदानले माटेराजीलाई गरेको हेडर र डिएगो म्याराडोनाले इङ्ल्यान्डविरुद्ध गरेको हाते गोलबारे के प्रतिक्रिया दिन्थे होला ? अघिल्लो विश्वकपबाट सुरु भएको सोसल मिडिया बहस यो विश्वकपसम्म झाँगिएको छ । टि्वटर र फेसबुक मैदानमा पाएको सफलताको खुसी साट्ने, दुःखमा पोख्ने र गल्तीको पश्चाताप गर्ने थलो भएको छ । फ्यानले आफ्ना मन पर्ने खेलाडीलाई टि्वटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा फलो गरेर फस्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन पाइरहेका छन् ।
हेल्लो शुक्रबारमा प्रकाशित
This is personal blog of Bijay Timalsina. Bijay isaKathmandu based Journalist associated with Kantipur Publications, the biggest media house in Nepal. Bijay writes weekly Technology column on Kantipur Daily. This blog contains some articles published on Kantipur Daily.
To know more about him :
Tweets by @bjtimalsina
काठमाडौ, पुस २५ -कसैले मन नपर्ने कुरा गर्दा नाक खुम्च्याउने । खुसी हुँदा मुस्कुराउने मानवीय स्वभाव हो । हामी अवस्थाअनुसार फिस्स हाँस्ने, ...
शिक्षाका कारण सफल प्रेनम
Prenam, in the office of her club. हेटौंडा÷‘पढेर हात्ति ठूलो भ’को हो र ?’ भन्नेहरु धेरै छन् । तर, मकवानपुर, पदमपोखरी–१ वनस्पतिकी प्रेन...
कर छल्छन् घरबेटी
बहालमा बस्नेसँग चर्को भाडा असुल्ने हेटौंडाका घरधनी (घरबेटी) ले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर भने छल्ने गरेका छन् । उनीहरुले भाडमा बस्नेसँग...
ब्राजिलमा अहिले विश्वकप फुटबल अन्त्यतिर पुगेको छ, फाइनलसहित दुई खेलमात्र बाँकी छन् । त्यहाँका १२ स्टेडियममा मात्रै यो खेल सीमित छैन । स्टे...
माघ २५ -भ्यालेन्टाइन डे को अर्थ बृहत् नेपाली शब्दकोशमा छैन । तर किशोरावस्थामा उक्लिइरहेका भ्यालेन्टाइन पुस्तालाई यसको परिभाषा कण्ठै ...
यु ट्युब रिभोल्युसन
Copyright © Bijay Timalsina | Powered by Blogger